မန်းလေးသား: ဖုန်းပိုက်ဆံကဒ် code လိုချင်ရင်
သေချာကြည့်ပါ ... Software ကတော့ Password Generator ပါ.. ဒါက အမှန်တော့ Generator လေးတစ်ခုပါ.. ဒါပေမယ့် ဗျာ.သုံးတတ်ရင်တော့ေ၇ွှပေ့ါ.. ကျွန်တော်အခု နှစ်သိန်းဖုန်းမှာဆိုရင် ကိန်းဂဏန်း 18 လုံးရှိပါတယ်.. ဒီတော့ ကျွန်တော်က numbers ကို အမှန်ခြစ်ပေးပြီး password length မှာ 18 ပေးလိုက်ပါတယ်... ပြီးရင် generate now ကို တစ်ချက်နိုပ်လိုက်မယ်.. code လေးကို မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်..
code လေးက ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်တည်းမှာ မသုံးရသေးတဲ့ ဖုန်းငွေဖြည့် code လေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သင် အတွက် ဘယ်လို ဖြစ်နိုင်မလဲ.. ကျွန်တော်က စမ်းဖူး ပါတယ်. ရသွားခဲ့လို့ အခုလို တင်ပေးလိုက်တာပါ.. အခုတိုင်းတော့မရဘူးပေ့ါဗျာ.. သုံးပြီးသား code no; တွေလည်းပါနေတယ်လေ ဖုန်းတစ်လုံးမှာ ကုဒ်ကို 4ခါ မှားခွင့်ပေးထားပါတယ်.. ကဲ သုံးခါစမ်းမယ်ဗျာ..
ဖုန်း 10လုံးဆို ကုဒ်အခု သုံးဆယ် စမ်းမယ်ဗျာ ကံကောင်းလို့တစ်ခုက တစ်သောင်းကဒ်လေး ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အကျိုးအမြတ်လေးတွေးကြည့်ပေ့ါပာုတ်ဘူးလား
Labels: Hacking, နည်းပညာ, အထွေထွေ, ဆော့ဖ်ဝဲ
Crack File , Patch File အသုံးပြုနည်း
Power director အသုံးပြုနည်း
DVD slide show build
USB multiboot download
Loic tool + Ebook
Photo CalendarMaker 1.75
Folder Lock ချချင်သူများအတွက်
php ဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ဝဘ်ဆိုဒ် တည်ဆောက်ခြင်း
အသုံးဝင်မယ့် ၀ဘ်ဆိုဒ် လင့်လေးတွေပါ
Microsoft Powerpoint စာအုပ်လေး ပါ
Microsoft Excel 2010 စာအုပ်လေး ပါ
Dream Weaver CS5+ Cracked
mp3 cutter ဆော့ဝဲလေးပါ
Advanced System Care Pro4.0.1.204
A+ (U Zaw Lin)
Command key for run box
Basic Command For Linux / Backtrack
ရင်ဆိုင်မလား? မျက်ကွယ်ပြုမလား? (သို.မဟုတ်)"ငါ့ဒိန်...
ဘယ်လောက်ချမ်းသာရင် ဇိမ်နဲ.နေနိုင်မလဲ (ဖတ်ဖြစ်အောင်...
သင်၏ မျက်နှာ ပေါ်မှ မှဲ့များအကြောင်း
Changing Welcome Screen Message
virus အကြောင်း ကျွန်တော်သိသလောက်
killling Recycler virus
window registry ဆိုတာ ကျွန်တော်သိသလောက်
key & crack web site
Networking အကြောင်း နဲနဲပါးပါး
command promp ပိတ်နည်း ၊ ဖွင့်နည်းလေးပါ
dvd\_cd drive မပေါ်ရင်
Disable & Enable Task Manager
Desktop က Icon မျှားတွေဖြုတ်မယ်..
lan ထဲမှာ ချက် ချင်ရင်
မကြည့်စေခြင်တဲ့ website တွေကို ဘလော့လုပ်နည်း
AVG key for 2012
Universal Documents Converter
Clean your PC with one click
Hidding Drive without any software
Server 2003 Ebook
Network Essential Eook
short cut to ဆိုတာလေး diasble လုပ်မယ်
Hacking from USB stick
Guest to Admin Account Hack
gmail account အဟောင်းကနေ အသစ်ကို အကောင့်တွေ အပ်နညး...
အင်တာနက်အသုံးပြုရာတွင် 20% ပိုမြန်စေရန်လုပ်ဆောင်ခြ...
kespersky 2012 (only key )
Super Hide IP (full)